Fanafainganana ny asam-pitsarana : Notsirihana tampoka ny tao Tsiafahy
Kabary zato, teny arivo, fa ny atao no hita. Tarigetran’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana sy Minisitry ny Fitsarazna, Atoa IMBIKI Herilaza ny fanafainganana sy fanatsarana ny asam-pitsarana, hanatrarana ny tanjona anaty Velirano nataon’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, dia ny Fitsarana manakaiky vahoaka. Porofo hita maso sy azo tsapain-tanana ny fidinana ifotony, notontosain’ny Tonia Mpampanoa Lalàna (Procureur de la République – PR) eo anivon’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (Tribunal de Première Instance – TPI) Antananarivo, sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky. Ny Fonjabe misy fiarovana manokana ao Tsiafahy, no nanaovana ny fitsirihana tampoka androany Alakamisy 02 Septambra 2021.
Araka izany dia nojerena tamin’ny antsipirihany ireo lisitry ny voafonja, ireo toerana misy azy ireo, nohenoina ireo fanamarihana sy fitarainana manokana avy amin’izy ireo, noraisina an-tsoratra tsirairay hatao tatitra amin’ny ambaratongam-pahefana mahefa isan-tsokajiny mba hoenti-manatsara ny asa. Anisany ohatra ny fangatahana fifindrana toeram-pamonjana, ny fanalefahan-tsazy, ary ny fanampiana ara-tsakafo sy ny vahaolana amin’ny fahafenoan’ny fonja.
Araka ny nambaran’ny Tonia Mpampanoa Lalàna eo anivon’ny TPI Antananarivo, Rtoa RAKOTOARIVONY Marie Annick, dia ilaina tanteraka amin’ny fanatsarana ny asa ny fidinana ifotony tahaka ny androany.
Ho an’ny Talen’ny Fonjabe misy fiarovana manokana ao Tsiafahy, Atoa RABENATOANDRO Lahatra Willy, dia nosinganiny manokana ny fihoaran’ny isan’ny voafonja, izay efa lasa 3 na 4 heny amin’ny tokony ho zakan’ny foto-drafitrasa. Na izany aza dia miezaka ireo tompon’andraikitra mifehy ny fandriam-pahalemana, sy ny fiahiana ny zon’olombelona. Nomarihiny fa tsy mbola nisy ohatra voafonja tratran’ny valanaretina Covid-9 ao Tsiafahy.
Pejy an-tsary fampahafantarana Lalàna ataon’ny DERL
Atrikasa fiofanana karakarain’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy Fanavaozan-dalàna (Direction des Etudes et des Réformes Législatives – DERL) mandritra ny 3 andro ao Ampitatafika, momba ny Lalàna mifehy ny fiankohonana.